Apple TV + dia handefa fanadihadiana momba ny fanafihana ireo tilikambo kambana tamin'ny 11/XNUMX | Avy amin'ny mac aho
Apple TV + dia handefa fanadihadiana momba ny fanafihana ireo tilikambo kambana tamin'ny 11/XNUMX
Loza izany septambra fahiraika ambin'ny folo Ny 2001 dia nodorana ho fahatsiarovana antsika rehetra izay gaga tamin'ny fahitalavitra tamin'ny nahavitan'ny fiaramanidina roa ireo tilikambo kambana, ary ny fotoana nahalavoany nahatonga fahafatesan'olona an-jatony.
Hotanterahina ny volana septambra ho avy izao 20 taona ny fanafihana mpampihorohoro mahatsiravina, ary ahoana no hatao raha tsy izany, Apple TV + dia handefa fanadihadiana manokana momba io 11 septambra io. Hanana fomba fijery vaovao amin'ny fanafihana ianao, hita avy amin'ireo olona nitondra ny firenena tamin'izany fotoana izany.
Apple TV + vao nanambara fanadihadiana vaovao manokana izay haseho amin'ny faran'ity taona ity. Ny programa dia mitondra ny lohateny hoe "9/11: Inside the President's War Room" ary hampiseho amintsika ny fanafihan'ny mpampihorohoro tamin'ny 2001 io raha ny fahitana ny valinteny avy hatrany avy amin'ireo olona nitana andraikitra lehibe tamin'io andro io.
Fiaraha-miasa miaraka amin'ny Apple TV + sy BBC One
Notantarain'i Jeff Daniels ilay horonantsary fanadihadiana ary hanisy ny fijoroana ho vavolon'ny filoha teo aloha George Bush y Dick Cheney ankoatry ny toerana manan-danja hafa eto amin'ny firenena. Hatao premiere miaraka amin'ny fahitalavitra Apple TV + sy amin'ny fantsom-panjakana anglisy One BBC.
Hanomboka amin'ny volana septambra ity seho ity ho fahatsiarovana ny faha-20 taonan'ny 11 septambra. Any UK, ny special dia alefa aloha BBCOne ary ho hita ao amin'ny Apple TV + io avy eo. Amin'ny faritra sisa eto amin'izao tontolo izao dia amin'ny Apple TV + no hanombohana izany.
Nanazava ny orinasa fa ny fanadihadiana dia hilaza ny tohin'ny fanafihana, amin'ny fanisana ny fanapaha-kevitra vonjy maika ao anatin'ny 12 ora voalohany taorian'ny nahavoazan'ny fiaramanidina World Trade Center. Hisy ny resadresaka ifanaovana amin'ireo mpikambana zoky ny fitantanan-draharaha sy ny sefom-pirenena izay niasa tamin'izany fotoana izany.
Ity 11 septambra manokana ity dia toa ny voalohany fiaraha-miasa ofisialy avy amin'i Apple. Midika izany fa ny famokarana dia novatsian'ny Apple sy ny BBC, ary izany no hamoahana azy roa amin'ny Apple TV + sy ny fantsona BBC One.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Apple TV + dia handefa fanadihadiana momba ny fanafihana ireo tilikambo kambana tamin'ny 11/XNUMX
Nilaza i Kuo fa hanomboka tsy ho ela ny famokarana MacBook Pros
Apple Academy Academy hanokatra ivon-toerana fianarana vaovao any Arabia Saodita